Football Khabar » लेवान्डोस्कीलाई उछिन्दै सिरो गोल्डेन बुट नजिक : रोनाल्डोलाई अझै चमत्कारको आश !
लेवान्डोस्कीलाई उछिन्दै सिरो गोल्डेन बुट नजिक : रोनाल्डोलाई अझै चमत्कारको आश !
जारी सिजनको युरोपियन गोल्डेन बुट दौडमा अब स्पष्ट तस्बिर देखिएको छ । गत राति लाजियोका फरवार्ड सिरो इम्मोबाइलले ह्याट्रिक गोल गरेपछि उनी अब गोल्डेन बुटका लागि सबैभन्दा नम्बर वान दाबेदार बनेका छन् । गत रातिको ३ गोलसँगै सिरोको कूल ३४ गोल पुगेको छ, जुन बार्यन म्युनिखका रोवर्ट लेवान्डोस्कीसँगको ३४ गोलसँग बराबरी हो ।
हालको ताज अवस्थामा लेवान्डोस्की र सिरो समान ३४–३४ गोलसहित संयुक्त रूपमा शीर्ष स्थानमा छन् । तर, युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो भने अब सो दौडमा पछि छाडिएका छन् । गत राति सिरोले ह्याट्रिक गरेको दिन रोनाल्डोले १ गोल मात्रै गर्दा उनी लेवान्डोस्की र सिरोभन्दा ठीक ३ गोलले पछि परेका छन् ।
हालको अवस्थामा सिरोले बार्यनका लेवान्डोस्कीलाई पछि पार्ने पक्काजस्तै छ । किनभने, सिरी ए लिगमा उनले अझै २ खेल खेल्न बाँकी छ । तसर्थ, सिरोले २ खेलबाट कम्तीमा १ गोल मात्रै गरे पनि उनले लेवान्डोस्कीलाई पछि पार्नेछन् । यदि उनले अब गोल गर्न नसके पनि लेवान्डोस्कीसँग संयुक्त रूपमा गोल्डेन बुट बाँड्नेछन् ।
तर, रोनाल्डोका लागि भने अब लेवान्डोस्की र सिरोलाई टक्कर दिन कठिन बनेको छ । तर, असम्भव नै भने छैन । रोनाल्डो हाल ३१ गोलसहित दोस्रो स्थानमा छन् । रोनाल्डोले पनि लिगमा अझै २ खेल नै खेल्न बाँकी छ । यदि रोनाल्डोले बाँकी खेलबाट जतिसक्दो धेरै गोल गरे भने र सिरो अबका २ खेलमा गोलिविहीन बने वा धेरै गोल बढाउन सकेनन् भने अझै पनि रोनाल्डोका लागि गोल्डेन बुट दौड खुलै छ ।
तर, त्यसका लागि रोनाल्डोको गोलको गति तिब्र हुनुपर्छ । ३५ वर्षका रोनाल्डो अझै पनि सिरी ए लिगको सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै पाँचौंपटक गोल्डेन बुट जित्ने दौडमा छन् । र, उनका लागि बाँकी २ खेल निर्णायक हुनेछन् । उनी कम्तीमा पनि सिरोसँग गोल संख्या बराबरी गर्न चाहन्छन् ।
प्रकाशित मिति १२ श्रावण २०७७, सोमबार १२:०६